Juan José Millás, onye mmeri nke onyinye Planeta (2007) | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri ise, onye Spen na-ede akwụkwọ na odeakụkọ Juan José Millás bụ onye edemede doro anya. Ka ọ dị ugbu a, o nwere karịa akwụkwọ 35, gụnyere akwụkwọ akụkọ, akụkọ, edemede na akụkọ. Ndị Valencian guzo n'ọhịa akwụkwọ na 80s site na akwụkwọ nke anọ ya: Wet akwụkwọ (1983). Edere akụkọ a nke ndị uwe ojii na arịrịọ nke onye mbipụta akwụkwọ nke ụmụaka, ebe ọ bụ na mmalite ya ọ nwere nnukwu nzaghachi.
Ọ bụ mgbe ihe ịga nke ọma nke akwụkwọ a mere Millás ji tinye aka na ide akụkọ, ọrụ ọ na-ejikwa ụdị nke mbụ. Enyerela ya ugboro iri na abuo na onyinye di nkpa, ma edemede ma odeakụkọ. Ha abụọ doctorates ukpono causa, nke Mahadum nke Turin na Oviedo nyere.
1.3 Omume ndi oru nta akuko
1.4 Akwụkwọ nke Juan José Millás dere
2 Nkọwa nke akwụkwọ ụfọdụ nke Juan José Millás dere
2.1 Wet akwụkwọ (1983)
2.2 Womenmụ nwanyị abụọ na Prague (2002)
2.3 Worldwa (2007)
2.4 Nwanyi nzuzu (2014)
2.5 Ndụ oge (2019)
Juan Jose Millas Garcia Amụrụ na Valencia (Spain) na Jenụwarị 31, 1946. Ọ sitere na nnukwu ezinụlọ, ọ bụ nke anọ n'ime ụmụnne itoolu. Ndị mụrụ ya bụ Vicente Millás Mossi — onye na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe— na Cándida García. Ọ nọrọ afọ ndị mbụ ya n'obodo ya, rue na 1.952 ọ kwagara ya na ezinụlọ ya Ọganihu, obodo ama ama Madrid.
Ọ na-amụ ihe n'abalị, ebe ọ bụ na ọ rụrụ ọrụ nwa oge na akụ na-echekwa ego n'ehihie. Ruo afọ atọ mụọ Nkà ihe ọmụma na Akwụkwọ Ozi —N’ọpụrụiche Pure Philosophy— na Mahadum Complutense nke Madrid, nke hapụrụ oge mgbe e mesịrị. Na mbido afọ iri nke 70 nke ' ọ banyere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Iberia.
Ná mmalite ya, ọ malitere uri, ọ bụ ezie na o mechara nyefee akụkọ akụkọ. Na 1975, o bipụtara akwụkwọ ọgụgụ: Cerberus bụ onyinyo; nke o ji nweta onyinye Sésamo n'otu afọ ahụ wee nweta nnabata dị ukwuu site n'aka ndị edemede edemede. N'ime afọ isii sochirinụ, o gosipụtara ọrụ abụọ: Ọhụụ nke mmiri riri (1977) na Ogige efu (1981).
Na 1983, o bipụtara akwụkwọ ya kacha mara amara: Wet akwụkwọ, akwụkwọ ọgụgụ nke jidere ọtụtụ puku ndị na-agụ akwụkwọ. Mgbe ihe ịga nke ọma ahụ gasịrị, n'ime iri afọ atọ gara aga ewusiwo oru ya ike Akụkọ 16 nke mere ya onye kwesiri onyinye dị mkpa. N'ime akụkụ Akwụkwọ Nsọ, ihe ndị a pụtara: Womenmụ nwanyị abụọ na Prague (2002), nke o jiri nweta mmeri Primavera; Na Ụwa (2007), onye mmeri nke onyinye Planeta (2007) na National Narrative (2008).
Omume ndi oru nta akuko
Na mbido 90 ', malitere ọrụ nta akụkọ ya na akwụkwọ akụkọ El País na mgbasa ozi ndị ọzọ dị na Spanish. Ihe e ji mara ya bụ ide ihe kọlụm akpọ "isiokwu", nke ọ na-agbanwe ihe omume a na-ahụkarị ka ọ bụrụ ihe dị egwu. N'ọhịa a ka a sọpụrụ ya n'ọtụtụ oge, n'etiti ihe nrite ya bụ: Mariano de Cavia Journalism (1999) na Don Quijote nke Journalism (2009).
Akwụkwọ nke Juan José Millás dere
Cerberus bụ onyinyo (1975)
Ọhụụ nke mmiri riri (1977)
Ogige efu (1981)
Wet akwụkwọ (1983)
Akwụkwọ ozi nwụrụ anwụ (1984)
Ọgba aghara nke aha gị (1987)
Owu ọmụma bụ nke a (1990)
Laghachi n'ụlọ (1990)
Onye nzuzu, nwuru anwu, bastard na adighi ahu anya (1995)
Usoro nke mkpụrụedemede (1998)
Elela anya n'okpuru akwa (1999)
Womenmụ nwanyị abụọ na Prague (2002)
Laura na Julio (2006)
Ihe m ma gbasara umu nwoke nta (2010)
Nwanyi ara (2014)
Site na ndò (2016)
Ezigbo akụkọ m (2017)
Ka onye ọ bụla ghara ihi ụra (2018)
Ndụ mgbe ụfọdụ (2019)
Nkọwa nke akwụkwọ ụfọdụ nke Juan José Millás dere
Onye nta akụkọ Manolo Urbina bidoro nyocha maka "igbu onwe" nke enyi ya ochie Onyeka onwenu, ebe ọ bụ chere na ọ na-egbu. N'ime njem a niile, ọ na-edekọ ihe mere n'otu akwụkwọ n'otu oge, dịka nchekwa ọ bụrụ na ihe mere ya. Womenmụ nwanyị abụọ dị mkpa na ndụ onye ahụ nwụrụ anwụ -Teresa na Carolina- ga-enyere Manolo aka n'oge nyocha ahụ.
N'ịchọ ihe ngosi, Teresa hụrụ akpati nwere ego na imebi ihe, nke metutara ndi dibia ogwu. Ihe niile na-amalite ịda mgbe Inspector Cárdenas na-ewere usoro ahụ. Onye ọrụ a ga-achọpụta otu n'ime isi ihe dị mkpa iji dozie ikpe ahụ n'otu ntabi anya, yana ihe ịtụnanya na ntụgharị dị egwu.
Wet paper (akwukwo nke ...
En la búsqueda nke onye dere akụkọ ndụ ya, Luz Acaso were akwụkwọ akụkọ na bumps n'ime aha nke nwa okorobịa a ma ama na-ede akwụkwọ. Ugbua ekpebiela - juputara na enigmas -, ọ na-aga n'ọfịs akwụkwọ edemede iji mee ụdị arịrịọ a; ọ na-anabata ya ma na-anabata ya. Álvaro Abril (onye ode akwukwo), n’aka nke ya, huru onwe ya n’ime mgba: n’agbanyeghi na akwukwo mbu ya mere ka o nwee ihe iga nke oma, enyo enyo n’obughi nwa nwoke ekweghi ka o nwee obi uto.
N'ajụjụ ọnụ de Luz ya na Álvaro, ọ na-akọ akụkọ banyere ndụ ya nke ahụ yiri e si ihe nkiri sitere na fim akụkọ ifo. Ọ bụ ezie na nnọkọ dị n'etiti abụọ ahụ na-agafe, nexus na-etolite n'ihi oge ndị na-adaba adaba. Na mgbakwunye, ọtụtụ mmadụ na-esonye na nkata ahụ, n'etiti ha, María José, enyi nke Luz onye nwere atụmatụ maka Álvaro.
Na ntụgharị nke ibe ụyọkọ ihe omimi, eziokwu, aghụghọ na ọtụtụ echiche efu malitere ịpụta ... Ihe ndị a gbara onye ọ bụla gburugburu n'oge nkata ahụ, nke na-ewere ọnọdụ na mmepe na-adọrọ adọrọ ruo mgbe a ga-ewepụta njedebe nke onye ọ bụla na-atụghị anya ya.
Womenmụ nwanyị abụọ na Prague ...
Otu nwata nwoke —Juan José — na-akuko etu nwata si lee ihe anya dika odi ya; ọmụmụ ya, afọ ndị mbụ na Valencia na nnyefe site n'obodo ya gaa obodo Madrid. Na-akọwa ahụmihe ya na gburugburu agha, enwe ọ withụ na iru uju, na ihu igwe oyi, ọbụbụenyi ọhụrụ na ịhụnanya ndị a na-enweghị atụ. Eziokwu nke ọ kwesịrị iji mara ya, ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ.
Mgbe ọ na-etolite, ọ na-akọ otú o si tụfuo ndị dị ya mkpa Na oge isi awọ niile ahụ siri ike ịnagide Enweghị ndị a hụrụ n'anya na-ekpebi mmegharị nke onye nọ n'oge uto, onye na-anwa ibi ndụ n'ụzọ kachasị mma. Ihe edere n'akwukwo a bu otutu oge nke odi ndu ya - banyere otu nwatakiri jiri nwayo buru nwoke - n'etiti eziokwu na echiche.
Julia bụ onye na-azụ azụ nke kpebiri ịmụtakwu banyere asụsụ, nke a n'ihi na que ọ na-echu ya ụra maka onye isi ya bụ Roberto, onye bụ ọkà mmụta sayensị. A na-akuziri ya onwe ya, na usoro a ihe odide na-abata n'uche onye ya na ya na-akparịta ụka na nyocha. Na mgbakwunye na ịrụ ọrụ na ebe a na-akụ azụ, Julia na-elekọta Emerita, bụ onye na-arịa ọrịa na-enweghị ike kpebie ịnwụ.
Otu ụbọchị mgbe nwa agbọghọ ahụ gara Emerita, gara Millás, onye nta akụkọ nke chọrọ ịkọ akụkọ banyere euthanasia. Mgbe ị matara Julia na nkọwa zuru ezu, ọ na-atụ aro ide akụkọ ya ozugbo. Caus, nwoke ahụ na-agabiga ihe okike. N'ụzọ dị egwu, ihe niile gbanwere ...: Emerita kpughere enigma, o juru onye nta akụkọ ahụ anya.
Nwanyị onye ara (Novel)
Juanjo Millas bụ onye edemede onye na-akọghachi izu 194 nke ndụ ya, dabere na ndenye ederede ya. N’ebe ahụ ka ọ na-ekpughe ụdị onye ọ bụ, ihe nwere nghọta, ihu ọchị, na-ekwu okwu njakịrị na obi ilu; na mpaghara mpaghara n'etiti ịdị ọcha na paranoia. N'otu aka ahụ, ọ na-akọwa ụfọdụ ahụmịhe, dịka ileta onye nyocha ya, ihe omume ntụrụndụ ya, ọgwụgwọ na ndụ naanị otu nwoke nke na-eleru anya.
Obere isi obula na akuko oge di nkpa, ya na onodu di egwu ma di nma. Se ha na-ewetara gị dị mfe ndapụta: dị ka gị akwụkwọ okporo ụzọ jam, nsogbu ezinụlọ, ma ọ bụ ụgbọ ala gị mmebi. Ọ bụ akụkọ ifo nke nwere ike ọ gaghị enwe eziokwu, gbasara mmadụ nkịtị, mana ọ na-enyekarị nsogbu na ọhụụ gabigara ókè.
Ndụ mgbe ụfọdụ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akụkọ ndụ » Juan José Millás: akwụkwọ
Nhọrọ nke akụkọ akụkọ akụkọ maka July